SOMALITALK - XOOLAHA
Mashruuca Daryeeelka Cafimaadka Xoolaha Soomaaliyeed....
Tan iyobadhtamihii sanadihii1960 maadka waxaa deeg bixiyayaal badani oo uu ugu horeeyo Midowga Urub (EU) maal geliyeen mashaariic dhowr ah oo laga fuliyey guud ahaan qaaradda Afrika inteeda badan oo ay ku jiraan Dhul-deegaaneedka Soomaalida (Somali Eco-system) kuwaas oo ay ka mid ahaayeen mashruuc la odhanjirey JP-15 (Joint Project 15) PARC (Pan-African Rinderpest Control Programme), PACE (Pan-African Control of Epizootic Diseases). Mashriicdaasi waxay ku wajahnaayeen dabargoynta cudurkii loo yiqiin Dabakaruubka ama Shifowga. Maanta waxaa la joogaa heer la filayo in cudurkaas Dabakaruubka adduun weynaha laga tirtiray.
Bilawgii sannadkan 2008 ayuu Midowga Urur hadana maal geliyey wejigii labaad ee Mashruucaas oo la yiraahdo SAHSP II kaas oo socondoona laba sanadood. Mashruucan oo ay hay’adahii fuliyey wejigii kowaad ku soo biireen laba kale oo kala ah VSF Germany iyo FAO wuxuu xooga saarayaa sidii loo adkayn lahaa la dagaalanka cudurada xoolaha siiba kuwa dhoofka ama suuqgeynta aafeeya.
SAMBABKA RIYAHA: Afka Ingriisiga waxaa lagu yiraahdaa ‘Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP)
Cudurka Sambabka Riyaha meelaha ay Soomaalida xoolo-dhaqatada ahi degto waxaa looga yaqaan magacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin :Riinweyne, Haarweyne iyo Gees-dhowr. Magacyadaasi mid kastaaba wuxuu sifaynayaa ama tilmaamayaa astaamaha ay dadku ku arkeen neefka cudurkani ku dhaco ama hadba xoolaha nooca uu saameeyo; Riinweyne iyo Haarweyne oo macnahoodu isku dhow yahay waxay tilmaamayaan taah ama jibaadmuujinaya in neefku aanu si caadi ah u neefsan karin oo dhibaato jirto.Gees-dhowr macnihiisu waxaa weeye cudurkan wuxuu eegtaa geeska riyaha oo keliya laakiin kuma dhaco idaha ay xerada ku wadajiran. Magaca Sambab laftiisu wuxuu sheegayaa in cudurkaasi saameeyo sambabada neefka uu ku dhaco. Akhri Qoraalak Ariga oo Dhan (pdf).
SAMBABKA LO'DA: Afka Ingriisiga waxaa lagu yiraahdaa ‘Contagious Bovine Pleuro-pneumonia (CBPP)
Cudurka Sambabka Lo’da waxaa keena nooc ka mid ah Bakteeriyadakuwa loo yaqaan Mycoplasma.Wuxuu ka dhacaa meelo badan oo adduunka ah oo ay ka mid yihiin badiba qaaradda Afrika daafaheeda kala duwan oo ay ku jiraan dhulka Soomaalidu degto. Sambabka Lo’du wuxuu ku dhacaa lo’da la dhaqdo iyo duurjoogta la yiraahdo Lo’a Gisida. Akhri Qoraalka Lo'ada oo Dhan (pdf).
FURUQA GEELA: Afka Ingriisiga waxaa lagu yiraahdaa Camel Pox
Cudurka Furuqa Geela waxaa keena nooc ka mid ah Fiiruska kuwa ka tirsan bahda loo yaqaan Poxviridae.Furuqa Geelu wuxuu ka dhaca qaaradda Afrika iyo tan Ashiya labada meelaha geela lagu dhaqo, oo ay ku jiraan dhulka Geeska Afrika ee Soomaalidu degto.Furuqa Geelu wuxuu ku dhacaa geela labadiisa nooc ee adduunka jiraba ;nooca leh labada kurus iyo kan leh kuruska keliya.Wuxuu Furuqa Geelu ku dhici karaa oo kale dadka. Akhri Qoraalka Geela oo Dhan (pdf).